MAYSIGA ADHIGA IYO MANAAFACAADKIISA – dhugasho
haddisabdi Abriil 18, 2016 sheekooyin
MAYSIGA ADHIGA IYO MANAAFACAADKIISA
Adhigu waa maysiga labaad ee ay soomaalidu aadka u jeceshahay. Xagga dhaqashadiisa aad ayuu ugu badan yahay soomaalida, sababtuna waa xoolo ku noolaan kara meel kasta, una adkaysan kara cimilada kala duwan, inkastoy dhaxantu u daran tahay. Waa xoolo si dhib yar lagu tabcan karo ninkii u jeedsada. Lixdii biloodba mar ayuu dhalaa. sidaa darteedna wax lala yaaba ma aha hadduu ruux kasta ku dhaho adhi baan leeyahay.
Guud ahaan xoolaha marka lagu xisabtamayo:-
Marka iib ahaan loogu xisaabtamayo, xoolaha waxaa loo kala saaraa labo:-
Adhigu waa riyaha iyo idaha
Ishkinkuna waa Geela, Lo’da iyo Dameeraha.
Marka dhaqaale ahaan loogu xisaabtamayana labaa xoolaha loo kala saaraa:-
Geelu waa geela uun.
Nugulkuna waa Adhiga iyo Lo’da.
Marka taya ahaan xoolaha loogu xisaabtamayana waa labo:-
Rafiiso: waa neef geel, Adhi, Lo’ ama dameer ah oo aan inyar oo ceeb ah habayaraatee lahayn. aan il la’ayn, aan naas la’aayn, aan jirranayn, oon aad u yarayn, waa rafiiso oo Zakadaa ku bixi, oo arrafadaa la qali karaa IWM.
Maquuno: waa neef iska caadi oo hadduu rabo ceebleh. tusaale, hal candhoola ah rafiiso galimayso laakiin maquunay gali, Sac tood ah oon la maali karin sidoo kale waa maquuno.
Adhiga oon uga danleenahay qormadan maanta, ayaa xoolaha nugulka ah ugu adkaysi badan maxaayeelay jiilaalki wuxuu biyaha ka qadi karaa inta badan seddex bari, adhiga suubaanka gabiibta ah ku noola shan ama lix maalmood ayuu qadi karaa.
(Siloo fila ka roone) ayay soomaalidu dhahdaa iyadoo adhiga ula jeedda.
Inay sidaas dhahaanna waxaa ugu wacan, adhiga oo sida la moodayo ka fiicanaada xilliyada abaarta ah.
Mararka qaar waxaa dhacda abaar maahiil ah oo dad iyo duunyaba xoodhisa. Marka ay abaartan oo kale dhacdo, dadka geela leh waxay u guuraan meel biyayowga ka fog oo ayn cid kale daaqi karayn waxayna soo dhaansadaan awrta.
Dadka lo’da lehna waxay degaan meesha biyaha aadka ugu dhaw, waa ka la yidhi:
“Lo’ waa caws iyo biyo ku nool”. soomaalidu mar kale waxay tidhaahdaa:
“Sac dhaqaalkiis waa inuu lugaha dambana biyaha kula jiro lugaha horena cawska kula jiro”.
“Baadi lo’aad biyaa loo fadhiistaa”.
“ Lo’ey nimaan ku horraynin yuusan kuu heesin” IWM.
Dadka adhiga lehna waxay degaan meesha u dhaxaysa geellayda iyo lo’leyda, waa meesha geela markuu soo aroorayana uu qulqulka ku soo maro lo’duna ayn fooftaanka ku qaadhin, marka way iska yara fiicantahay saxarkeedu adhigana wuu ku barbixi karaa, haweenkuna dameeraha way ka soo dhaansan karaan oo waa meel aan aad biyaha uga sii fogayn aadna biyaha ugu sii dhawayn sida lo’leyda. Sidaa daraadeed ayay u dheheen “Adhigu waa si loo fila ka roone”.
Maahmaahyada ay soomaalidu u soo qaadato adhiga iyo faa’idooyinkiisa.
Adhi niman lahayn marti xilkaskeed maaha
Nin adhi la’aan reer dhaqday adduunyo la’aan buu dhaqay
Bismilaahi la’aan adhi ma bato (Sadaqa la’aan)
Dibir ku hay oo hadi fadhiisi waa adhi habaarkiis
5. Xooxdiyo gadhoodhkaa riyaha lagu xasuustaa.
Waxay gabdhuhu adhiga ku daajiyaan heeso u gaar ah. markastana uma heesaane galabti kaliya ayay ku mayracaan xilliga barwaaqada ah. sababta galabti loogu heesana waa waraabaha iyo wixii cadaw ahba inuu kaga leexdo oon cidla la moodin adhiga.
gabadh oo dhan adhiga uma heestee waa tii fiidhoon ee suugaantana jecel oo kaliya waxa ka dhex shanqadha markuu casarkii xidhadh maanyaleh dhex shabbaaxayo.
Dhawr ula jeeddo ayay gabdhuhu adhiga ugu heesaan markuu soo dheelmanayo:
1:Si uun adhigu u cabsan oo uu u weheshado gabadha.
“Makhri bood baad”
“Meel u hoyaniye”
2: Inuu ku xasilo daaqa oo sifiican u mayracdo, illeen makhrib ayuu xaroon oo sida geela ma mirtee.
waaka ay leedahay gabadhu:- iyadoo ku luuqaynaysa.
“Geelu kuu nacay”
3: Marna si uun u kala hadhin oo xidhka uga soo wada baxo.
“Bayla bayloy” hoohohobe
“Bayloy bahalladi” …..
“Bogga hoosiyo” ..
“Bayda qaban jiray”
“Yayn ku boobine”
“iiga soo badi”.
Marna iyadoo u sheegaysa adhiga in uu soo gaadhay meeshii fooftaanka loogu waday oo uun halka sii dhaafi karin ayay ku caraabinaysaa inuu ku xasiyo oo uun saluugin, markaasay ku luuqaynaysaa:
“Saloola carwoy” hoohohobe
“Salool dheerey” hoohohobe
“Sadki waa kane” hoohohobe
“Ha saluugine” hoohohobe
“Salooloo sudho” hoohohobe
Marna iyadoo faaninaysa adhiga geelana waxba ka soo qaadaysa ayay ku luuqaysaa sidan;
“Markuu xagar cuno” Hoohohobe
“Xag madheedh cuno” …..
“Xumba gibillow” ……
“Geel ma xoolaa!” …..
intaas waa qayb ku saabsan maysiga adhiga.
Abwaan maxamuud cabdullaahi sangub